Yaalii Fonqolcha Mootummaa Naannoo Amaaraa – Kichuu
[ June 16, 2021 ] Tigray and Oromo region conflict report!!	Videos
[ June 16, 2021 ] Ethiopia’s flawed elections risk dividing the country further	Africa
[ June 16, 2021 ] Ethiopian economic reform falls flat, investors flee	Business
[ June 16, 2021 ] Facebook pulls down fake accounts ahead of Ethiopia’s general election	World
[ June 16, 2021 ] Why has civil war returned to Ethiopia?	World
[ June 16, 2021 ] Ethiopia’s Abiy predicts peaceful poll in final campaign rally	Africa
[ June 16, 2021 ] Ethiopia’s election: the stakes are high amid fear, mistrust, and violence – In-depth Analysis	Africa
[ June 16, 2021 ] Dubbii Kana oromoon Quba qabaachuu Qaba!! Ergamttoonni Neftegna..	News
[ June 16, 2021 ] Abiy Ahmed Ali was using vehicle owned by @UN for his sham election campaign in Jimma city, OROMIA,	News
[ June 16, 2021 ] US playing hardball with Ethiopia, rallies EU for more Addis sanctions	World
HomeAfaan OromooNewsYaalii Fonqolcha Mootummaa Naannoo Amaaraa
Yaalii Fonqolcha Mootummaa Naannoo Amaaraa
[perfectpullquote align=”left” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=”16″]
Naannoo Amaaraatti Yaaliin fonqolchaa yaalame
Preezidantiin Naannoo Amaaraa dhukaasa banameen ajjeefaman
Itaamaajoorshuumiin waraanaa Itoophiyaa ajjeefaman
Birgaadiyeer Janaraal Asaamineew Tsiggee yaalii fonqolchaa kana duuba jiru jedhame
‘Yaaliin taasifame kan sirna biyyattii diigurratti xiyyeeffatedha’- Dr Dabratsiyoon
(bbcafaanoromoo)—Haala yeroo ilaalchisuun Itti aanaan Pirezidaantii Naannoo Tigraayi Dr Dabratsiyoon Gabramikaa’el har’a ibsa kennaaniiru.
‘’Gocha kana kan raawwatanis humnootaa filannoon mo’achuu akka hindaneenye hubatanii fi farroota Heera biyyattii, akkasumsa kannen humnaan aangoo qabachuu barbaadaniidha,’’ jedhaniiru.
Ajjeechaan Janaraal Sa’ire irratti raawwatame, kallattiin yaalii fonqolchichaa waliin kan walqabate ta’uu kan dubbatan Dr. Dabratsiyoon, ‘‘humnootiin humnaan aangoo qabachuuf yaalanis namoota ittisa biyyaa hogganan, kaayyoo isaanitiif gufuudha jechuun ajjeessan,’’ jedhaniiru.
Wayita Janaraal Sa’ire ajjeesuuf dhaqanittis, sooramarra kan ta’an Meejar Janaraal Gazaa’ii waliin waan argamaniif ajjeefamusaanii ibsaniiru.
‘‘Kunis kan nama tokkoo ykn lama qofarratti xiyyeefate osoo hintaane, eenyummaa kan bu’urreffatee fi sirnicha diiguuf kan kaayyeeffateedha,’’ jedhan.
Yaaliin fonqolchichaa fi ajjeechaan raawwataman hundi kan itti karoorfaman ta’u kan himan Dr Dabratsiyoon,”waan akkasii raawwachu akka danda’an sochiilee isaanii irraa hubachuun ni danda’ama. Kanaanis hindhaabbatan. Qabsoorratti argamna. Dhumarrattis ni mo’anna,’’ jechuun dubbataniiru.
Janaraal Sa’ireen dhunfaa isaaniif osoo hintaanee uummata Itoophiyaatiif oolmaa heddu oluu kan dubbatan Dr Dabratsiyoon, gadda itti dhagahamees maqaa uumata naannichaatiin ibsaniiru.
Akkasumas cinaa uummata Amaaraa kan hiriiran ta’us himaniiru. ‘‘Uummata Amaaraa waliin tibba gammachu akkuma turre, ammas yeroo gadda isaatti waliin jirra,’’ jedhaniiru.
Yaaliin fonqolchaa kaleessa Naannoo Amaaraaatti taasifame ture walqabatee aanga’oonni motummaa olaanoon afurii lubbusanii dhabaniiru.
Waa’ee Janaraal Asaaminew Tsiggee maal beektu?
Waa’ee Janaraal AsaaminewTsiggee qabxiilee muraasa
Janaraal Asaaminew Tsiggee dhalatanii kan guddatan Walloo Laastaa keessatti.
Osoo gara dhaabbata Sochi Dimokiraasummaa Uummata Amaaraatti hinmakamiin dura, Koleejjii barsiisoota Daseetti barsiisaa turan.
Erga Dargiin aangoorraa buufameen boodas, naannoo dhalootaa isaanitti bulchaa ta’un mudamanii tajaajilaaniiru.
Booda keessa gara ittisa biyyaatti makamuun waraana daangaa Itoophiyaa fi Eeritiraa keessatti qooda fudhataniiru ture.
Biyya US itti barnoota loltummaa hordofanii kan turan Asaaminew, waraanichaa booda muudama Janaraalummaa argachuun waraana keessatti tajaajilanii turan.
Birgaadar Janaraal Asaaminew kooleejjii ittisa biyyaa olaantummaan hogganuu fi barsiisuun akka tajaajilanis ni himama.
Isaan boodas, ALI bara 2001tti qondaaltoota waraanaa waliin fonqolcha motummaa yaaluun hidhamanii turan.
Janaraalichi, himannaan irratti dhiyaatee, balleesaan irratti argamuun aangoonsaanii irraa kafamuun hidhaan umurii gutuu itti murtaa’e, waggoota sagaliif hidhaarra turaniiru.
Isaan boodas erga Dr Abiy gara aangootti dhufanii booda, hidhaarraa dhiifamaan hiikaman.
Dabalaatanis aarsaa kanfalanii xiyyeefannaa keessa galuun, taayitaan akka deebii’eefi danataansaaniis akka kabajamuuf taasifameera.
Naannichis itti gaafatamaa biiroo nageenyaa taasisuun muudeera.
Sababii yaalii fonqolcha motummaa naannichatti kaleessa taasifameen, lubbuu aanga’oota afurii galaafate duba akka jiran paartiin naannicha bulchu ADP’n beeksiseera.
Ibsa Waajira Ministira Muummee
Waajirri Ministira Muummee yaalii fonqolchaa fi haleellaa magaalaa Finfinneettii raaawwatame ilaalchisee ibsa baase.
Qaamoleen yaalii fonqolchaa kana keessatti hirmaatan adamfamanii to’annoo jala akka oolaniif MM Abiy ajaja duula keennuu isaanii ibsichi eerera.
Dhimmichi kan naannoo tokko qofa osoo hin taanee, guutuu biyyattii jeequu kan kaayyefate waanta’eef, mootummaan Federaalaa fi kan naannolee nageenya uummataa mirkaneessuuf qindoomuun waliin hojjechaa akka jiran ibseera.
Eegumsi nageenyaa magaalaa Finfinnee cimuu jiraattootni himan
Eegumsi nageenyaa magaalaa Finfinnee cimuu jiraattootni BBC tti himan
Magaalittii bakka garaagaraatti haalli eegumsa nageenyaa cimuu gabaastootni kenya Finfinneerraa ibsaniiru.
Sochiin baratamaan jiraattota magaalittii jijiirama qabaachuu baatuus, bahaaafi galma magaalittiirratti to’annoon cimuun beekameera.
Sagantaaleen gurguddoon magaalittii keessattii gaggeefamuuf qabaman hedduun haqamuu bulchiinsi magaala Finfinnee galagala beeksiisuun ni yaadatama.
Kantiibaa Itti aanaan Magaalaa Finfinnee Injinara Taakkalaa Uumaa, garuu ganama kana ibsa kennaniin magaaliittiin nagaa qabdii jedhaniiru.
Magalaan Bahirdaariis to’annoo fi eegumsa cimaa keessa akka jirtu barreerra.
Jiraattootni magaalitti gara mana jireenyaa Dr. Ambaacheew deemuun gadda isaanii ibsaa akka jiran kanneen BBC’n dubbise himaniiru.
Preezidantiin Naannoo Oromiyaa, Obbo Shimallis Abdiisa, gadda isaanii ibsan
Preezidantiin Naannoo Oromiyaa, Obbo Shimallis Abdiisa, gadda isaanii ibsan.
Obbo Shimallis Abdiisaa haal yeroorratti ibsa ETV irratti kennaniin, haleellaan raawwatame, uummata Oromoo, Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Mootummaa Federaalaa irratti akka raawwatameetti lakkoofna jedhe.
Yeroo ulfaataa kanatti mootummaa Naannoo Amaaraa fi Uummata naannichaaf, mootummaan naannoo Oromoyaa deeggarsa barbaachisaa ni taasisa jedhaniiru.
Sabaafi sab-lammiin biyyatti yeroo kanatti tokkummaan akka dhaabbatan waamicha dhiyeessaniiru.
”Haleellaan raawwatame qabsoo eegallerraa duubatti kan nu deebisu osoo hin taane itti kan nu cimsudha” jedhaniiru.
Maatii fi lammilee biyyattii hundaafis jajjabina hawwanii jiru.
Qondaaltonni mootummaa afur ajjeefaman
Ibsa amma waajjira MM tiin kennameen qondaaltoonni afur ajjeefaman:
– Janaraal Sa’ira Mekonnin – Hoogganaa Waraanaa biyyattii
-Janaraal Gazaa’ii Abarraa- Hoogganaa waraanaa gameessa
– Dr. Ambacheew Mekonniin- Preezidantii Naannoo Amhaaraa
-Obbo Izeez Waase- Gorsaa olaanaa preezidaantii naannoo Amhaaraa ta’u ibsaniiru.
Kana malees Janaraal Sa’ira Mekonninii fi Janaraal Gazaa’ii Abarraa eegduu isaaniin ajjeefmuufi eegdonni yakkicha raawwataniis to’annoo jala olfamuun ibsameera.
Itti gaafatamaan nageenya naannoo Amhaaraa Birgaadar janaraal Asaaminaw Tsiggee yaalii fonqlichichaa duuba jiraachu ibsanii garuu qabamuufi qabamuu dhabuun isaanii hin dubbatamne.
Bakka Dr. Ambaachoo Obbo Laaqe Ayaalew kan Itti aanaa preezidaantii naaniichaa turan yeroof bakka bu’un himameera.
Abbaan alangaa Naannoo Amhaaraa, obbo Migbaaruu Kebbede irra ammo midhaa qaamaa qaqqabuunis ibsameera.
Taateewwan lamaaniinu wal qabatee shakkamtoonni hidhamu ibsamee, lakkoofsi namoota hanga ammaatti to’anno jala olfaman garuu hin eeramne.
Janaraal Sa’iree Mekonniin eegduu isaaniiniin ajjeefaman
Hooganaan waaraanaa Itoophiyaa Janaraal Sa’iree Mekonniin eegdu isaaniin mana isaanii keessatti ajjeefamuu Waajirri Ministira Muummee amma ibsa kennaa jiruun hime.
Ajjeechaan isaanii kun yaalii fonqolchaa wajjin akka walqabatuuf kaleessa gara galagalaa akka raawwatame ibsameera.
Itaamaajorshuumiin Waraanaa Itoophiyaa, Janaraal Sa’ireen yaalii fonqolchaa Naannoo Amaaraatti raawwatame to’achuuf adda durummaan hoogganaa akka turan, MM Abiy ibsa halkan edaa ibsa kennaniin himaniiru.
Hoogganaan waraanaa gameessi biroon Meejar Janaraa Gazaa’ii Abarraa kan isaan waliin turaniis ajjeefamuun mirkanaa’eera.
Miseensonni hojii raawwachiftuu ABUT bufata TV naannoo Tigraayiin ajjeechaa qondaltoota lamaaniitti gadda itti dhagahame ibsaniiru. Ajjeechichi ‘kanneen bitamtootaan’ raawwatameedha jedhaniiru.
Dura taa’aan ABUT fi Pirezidaantii itti aanaan naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa’el ibsa akka kennan eegamaa jira.
Janaraal Asaaminew Tsiggee fonqolcha kana duuba jiru
Hoogganaan nageenyaa Naannoo Amaaraa Janaraal Asaaminew Tsiggee fonqolcha kana duuba jiru .
Ganaraal Asaaminew yaalii fonqolchaa kana nama hoogganan akka ta’e ibsa dhaaba naannicha buchuu waabeffachuun sabaa himaan naannoo Amaaraa beksiseera.
Ganaraal Asaaminew, jijjiiramni dhufuun dura mootummaa Itoophiyaan qabamanii waggoota saddeetiif hidhaa turan.
Namoota yalii kana keessatti hirmaatan keessaa gariin yoo ajjeefaman, gariinammoo qabamaniiru. Kanneen miliqaniis adamfamaa akka jiran sabaa himaan naannoo Amaaraa beeksiseera.
Pirezidaantiin Naanoo Amhaaraa Dr Ambaachoo Makonnin ajjeefaman
Pirezidaantiin Naannoo Amhaaraa Dr Ambaachoo Mekonnin yalii forqollichaa kaleessa galagal gaggeeffameen ajjeefamusaanii EBCn gabaaseera. Dr AMbaachoo dabalatee gorsaan damee Ijaarsa naannichaa Obboo Izazi Waaseewi halleellaa irratti raawwatameen ajjeefaman.
Qaamooleen haleellicha gaggeessaniis tibba waligahiirra turan ta’uun barameera.
Dr Ambaachoon pirezidaantiin naanniicha duraanii Obbo Gadduu Indaargaachoo bakka bu’uun gara aangootti erga dhufanii ganaa baati shaniif deemu ture.
Qaamoolee yaalii fonqolchichaa keessa harka qabu jedhamanii shakkamanis to’annoo jala olfamunsaanii ibsameera.
Gabaasa kallatti yaalii fonqolcha mootummaa Naannoo Amaaraarratti dhiyeessuu jalqbneerra
Preezidantiin Naannoo Amaaraa Ambaachoo Mokonniin (PhD) ajjeefamuun mirkanaa’e.
OMN: Naannoo Amaaraatti yaaliin fonqolcha Mootummaa? (Wax,23,2019)
Oromia Media Network was live.
Gen. Hassan Ibrahim, Chief of Ethiopian military intelligence is under house arrest.
Ethiopia army chief shot dead in ‘coup bid’ attacks
Tigray and Oromo region conflict report!!
Ethiopia’s flawed elections risk dividing the country further
Facebook pulls down fake accounts ahead of Ethiopia’s general election
Why has civil war returned to Ethiopia?
Ethiopia’s Abiy predicts peaceful poll in final campaign rally
Ethiopia’s election: the stakes are high amid fear, mistrust, and violence – In-depth Analysis
Dubbii Kana oromoon Quba qabaachuu Qaba!! Ergamttoonni Neftegna..
Abiy Ahmed Ali was using vehicle owned by @UN for his sham election campaign in Jimma city, OROMIA,
US playing hardball with Ethiopia, rallies EU for more Addis sanctions
History is being denied in Abiy and Isaias’ war on Tigray
Ethiopia’s envoy tells UN Security Council Eritrean troops to leave Tigray ‘soon.’
Oduu Ajaa’ibaa! WBOn zoonii Kibbaa Cibraa Soddoom Booroo marsaa 10ffaa eebbisee jira guyyaa har’a!!
WBOn Lammiilee Afghanistan 2 to’achuu fi Dhiphina Oromoota Saudi keessa.